Microsoft inotenga ThreadX, chaiyo-nguva yekushandisa system | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inotenga Express Logic uye yayo ThreadX chaiyo-nguva yekushandisa system
Webhusaiti ye Express Express, iyo kambani yakatengwa neMicrosoft
Microsoft yakazivisa kutengwa kwe Express Logic uye yayo chaiyo-nguva yekushandisa system ThreadX yemari isingazivikanwe. Izvi zvinogadzira ThreadX iyo yechitatu chikuva cheInternet yezvinhu yekambani. Ini ndanga ndatova neiyo yakavakirwa paWindows (Windows 10 IoT) uye imwe yakavakirwa paLinux (Azure Sphere).
ThreadX ndeye chaiyo-nguva yekushandisa system. Real-nguva anoshanda masisitimu (RTOSes) anosiyana nemapuratifomu akajairika mukufungidzira kwavo. Ndiine RTOS, mugadziri anogona kuziva huwandu hwenguva inotora kutora kubva pane imwe nzira kuenda pane imwe. Iko kunofungidzirwa 6.200 bhiriyoni ThreadX deployments inomhanya pamakumi gumi nemaviri emhando dzakasiyana dze processor kana ma microcontroller.
Iri kirasi rehurongwa hwekushanda rinovimbisa kuti maapplication anokwanisa kupindura munguva kune zviitiko zvehardware, nguva, kana zvimwe zvinhu zvinogona kuita kuti chikumbiro chide kushandisa iyo CPU.
Ndeipi iyo ThreadX chaiyo-nguva inoshanda sisitimu?
ThreadX inoshandisa zvakasiyana seNASA's Deep Impact mission kana kuve chikamu cheiyo firmware yemazhinji maWi-Fi zvishandiso. Izvi Mabasa anoda chaiyo-nguva yekushandisa sisitimu nekuti pane nguva zvipingamupinyi zvekuti vangakurumidza kupindura sei.
Kunyangwe Linux inogona kuchinjika kuti ive nezvimwe maficha eRTOS, ThreadX ine mukana wakakura: idiki. KANAKuiswa kushoma kweThreadX kunotora zviuru zviviri zvekuchengetedza uye zvinoda 2.000 KB ye RAM. Microsoft's Hardware yeSphere inoshandisa yakajairwa-yakagadzirirwa ARM processor, ine 4 MB ye RAM yezvishandiso uye 16 MB yekuchengetedza.
Microsoft ronga kushandisa ThreadX zvese pamwe chete neLinux uye yakazvimiririra ThreadX inomhanya padhuze neyakajairwa Linux kugovera ichapa chaiyo-nguva kugona kune izvo zvikamu zvekushandisa izvo zvinoda iyo, pamwe neLinux nharaunda yezvisiri-zvakakosha zvikamu zvekushandisa. Kune mamwe maIoT zvishandiso zvidiki zvakanyanya kune Sphere, ivo vanomhanya ThreadX yakanangana.
Isu raMicrosoft Hakusi kubheja zvishandiso yakazvimirira. Izvo zvavari kubheja pazviri zvishandiso zvakabatana kune yavo yekutarisa uye manejimendi gore rebasa nyanzvi muInternet yezvinhu Azure IoT Hub. Vaongorori vanofungidzira kuti pamwe nekuwedzera kweThreadX, kambani ichava mukwikwidzi akasimba kuAmazon, iyo ine yayo chaiyo-nguva yekushandisa system: Amazon FreeRTOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Microsoft inotenga Express Logic uye yayo ThreadX chaiyo-nguva yekushandisa system